I-SEO ayimi ngeSayithi Lakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 12, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngezikhathi ezithile, DK New Media unendawo esimisweni sethu esimatasa sokusiza izinkampani esisebenzisana nazo. Sibloga ngabathile, sinabo ku- umbukiso womsakazo, senzelwe abanye ama-infographics, futhi sinikeza ngamalayisense esoftware (simane sathumela inqwaba yokuqapha kwethu ezokuxhumana nabantu) futhi senza nokuphakanyiswa kwe-SEO! Ngamaholide ngonyaka odlule, sinqume ukukwenza lokhu konke labalingani bethu.
Esinye salezo zipho kwakuyiphakheji yokuncoma yokuncoma ye-Agent Sauce, a ukumakethwa kwezindlu inkampani. U-Adam uhlala esiza ibhizinisi lami - kungaba ukusiza ngekhodi nomsebenzi wengqalasizinda, ukusikhuthaza, noma ukuba ngumngane osekelayo oncike kuye. Kwakuyisikhathi sokukhokha! Inani laleli phakethe lalicishe libe yi- $ 1,000.
Sikhombe amanye amabhulogi, amanye amasayithi wokubekisa, nezinye izinsiza ezifanelekile saya emsebenzini wokubhala okuqukethwe okuhle yonke indawo egameni lika-Adam. Isoso se-Agent besivele silungiselelwe futhi sibekwa ohlwini lwamagama athile - ngakho-ke simane sagxila kuwo. Ukukhushulwa kusebenze futhi u-Adam wayenomusa ngokwanele ukuthi angaba imiphumela.
Kusukela ngoJanuwari (ngaphansi kwezinsuku ezingama-60), i-Agent Sauce's analytics uthathe ukuthuthuka okuphawuleka ngemuva kwephromoshini:
Ukuvakasha kukhuphuke ngo-47%
Ukubukwa kwamakhasi kukhuphukile ngama-54%
Izinga lokushaya lehle ngo-10.5%
Isikhathi esizeni siphelile ngama-37%
Ukuvakasha okusha kukhuphuke ngo-7%
Uma ubheka lezi zibalo ngokuhlanganyela, uzobona ukuthi zonke izinombolo zihanjiswe ngendlela efanele. Kungani? Ukuthi isayithi lakho lenzelwe ngaphakathi okuqukethwe okulungile akusho ukuthi izinjini zokusesha zikubheka kanjalo - okuqukethwe okungekho esizeni nezixhumanisi ezibuyela kusayithi lakho kuyisiqinisekiso. Lapho izinjini zokusesha zibona amagama angukhiye akhomba kusayithi lakho, bacindezela isayithi lakho phezulu kulezo zigaba.
Sibe namakhasimende esisebenze nawo lapho ithrafikhi yonke inciphe khona… kepha ngoba ibhekiswe kangcono, imikhondo kanye nokuguqulwa kukhuphukile empeleni. Imayelana nokuletha izethameli ezifanele kusayithi lakho, hhayi izethameli eziningi kuphela. Izibalo zika-Adam zibonisa ukuthi abantu bahlala isikhathi eside, bashiya okuncane, futhi okuningi kwabo kuyeza… yilokho kanye wonke umuntu afuna ukukubona - futhi akwenzekanga ngokwenza noma yini esizeni!
Feb 13, 2011 ngo-7: 16 PM
Ngiyasola ukuthi okufunwa yiDigital Home Info ngempela ukubhaliswa okukhokhelwa kakhulu kwezinsizakalo zabo, hhayi nje ukuvakashelwa okwandisiwe nokubukwa kwamakhasi, njll. Ukuguqulwa kuhamba kanjani ngawo wonke umgwaqo owandayo? Akukhona konke lokho okubaluleke ngempela?
Feb 13, 2011 ngo-8: 08 PM
Umbuzo ovelele - futhi ngivumelana nawe 100% Paul. Njengezimboni eziningi, u-Adam akanayo inqubo yokuphuma esizeni sakhe futhi ukuzibandakanya kuyakhuthazwa kuze kuthengiswe. U-Adam wayejabule ngokwanele ukuhlinzeka ngalezi zibalo kepha ukuthengisa akwaziwa okwamanje. Ngisola ukuthi kuzoba izinyanga ezimbalwa ezengeziwe njengoba eshayela lezi zihola ngomugqa wakhe wokuthengisa.
Feb 15, 2011 ngo-6: 29 AM
Paul, ngiyavuma ukuthi esikufunayo ngempela ukuguqulwa okungcono. Yize sinenqubo yokuphuma ku-inthanethi (uxolo u-Doug), ambalwa kakhulu amakhasimende ethu athatha leyo ndlela. Njengoba uDoug asho ukuthi sikhiqiza ukuhola ngokusebenzisa isiza futhi sibanakekele ekuthengiseni. Lapho ngibona ukuphawula kwakho izolo ebusuku ngadlula ngabheka imikhondo ekhiqiziwe nokuthengiswa kuqediwe ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Ngiyakutshela ukuthi sikhiqize ukuhola okungaphezulu kwama-40% futhi sengeze amaklayenti angama- ~ 25% ngaphezulu kulo nyaka odlule. Kungaba yizici eziningi, ukuthuthuka kwezomnotho, isikhathi sonyaka, ukuthengisa okwandisiwe kube yiyona kanye ibhizinisi elisezingeni lokukhula, njll. Okusemqoka ukuthi ukwanda kwezimoto ezisemthethweni (hhayi nje izinhlamvu zamehlo) kuholele ukwanda kokuthengisa. Ukhiye ukuthi kwakuwumgwaqo osemthethweni.